Dadweynaha oo ka soo horjeeda shirkadaha iskuulada ka macaasha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dadweynaha oo ka soo horjeeda shirkadaha iskuulada ka macaasha
La daabacay fredag 4 november 2016 kl 11.14
Dadweynaha oo aad uga soo horjeeda shirkadaha iskuulada ka macaasha
sawir: JESSICA GOW / TT
Shacabweynaha dalkaan Iswiidhan ayaa badankoodu waxay aad uga soo horjeedaan macaashka ay shirkadaha gaarka loo
leeyahay ka helaan goobaha adeega guud ee bulshada dalkaan u adeega khaasatan waxay si xoog leh uga soo horjeedaan macaashka shirkadahaasi ay ka helaan iskuulada ay gacanta ku hayaan.
Qiyaastii boqolkiiba 46 ayaa dadkii arrinkaan wax laga weydiiyey waxay u arkaan in shirkadahaas gaarka loo leeyahay ee gacanta loo galiyey iskuulada , ay raad aad u xun dhaxalsiiyeen, meesha dhanka kale 64 boqolkiiba ay dadweynuhu ka soo horjeedaan in shirkadahaasi ay qeybsadaan macaashka ay iskuulada ay gacanta ku hayaan ka helaan, sidaasna waxaa lagu muujiyey baaritaan ay si wadajir ah u sameeyeen wargeyska Dagens Nyheter iyo Ipsos.
Dhanka kalana dadweynaha ayaa wax wanaagsan u arka shirkadaha gaarka loo leeyahay ee gacanta ku haya adeegyada guud ee dhanka caafimaadka la xiriira, sida tusaale ahaan rugaha daaweynta ilkaha iwm.
Macaashka ay shirkadaha gaarka loo leeyahay ka helaan adeegyada guud ee caafimaadka la xiriira ayaa dalkaan Iswiidhan waxay ka abuurtey dood aad iyo aad u balaaran.
Khabiir ay dawladda dalkaani u xilsaartey in uu soo baaro soona gudbiyo siyaabihii loo xakameyn lahaa macaashka ay shirkada gaar loo leeyahay ka helaan goobaha adeegyada guud ah ee canshuurta dadweynaha dalkaan lagu maalgaliyo sida tusaale ahaa iskuulada, isbitaalada iyo xarumaha dadka waayeelka ah lagu hayo , ayaa wuxuu warbintiisa soo gudbin doonaa bishaan November 8-deeda.
Xisbiyada isgaashaanbuureystey ee garabka bidix ayaa waxay horey isugu raaceen in macaashka goobahaas guud laga helo badankeeda dib loogu maalgaliyo isla goobahaas, balse xisbiyada garabka middig ee dalkaan ay difaacaya shirkadahaas gaarka loo leeyahay iyo macaashka ay ka sameeyaan goobahaas adeega guud ah.
Khilaafka noocaas oo ah oo ka dhextaagan labada garab ee xisbiyada dalkaan Iswiidhan ku bahoobeen, ayaa maadaama labadaas garab uusan midkoodna aqlabiyad ku heysan baarlamaanka dalkaan Iswiidhan, waxaa arrinkaas ka dhex faa’iidey xisbiga Sverigedemuqaraadi-ga oo hadba halkii ama dhinacii uu isagu raacaa arrinka la isku hayo dhinac u ridda.
Dadweynaha taageera gaashaanbuurta xisbiyada garabka bidix ayaa u badan dadka aadka uga soo horjeeda in goobaha adeegyada guud ah gacanta loo galiyo shirkado gaar loo leeyahay ka dibna ay macaash dhankaas ka sameeyaan, meesha dhanka kalana dadweynaha taageera gaashaanbuurta xisbiyada garabka middig ay wax wanaagsan u arkaan in adeegyadaas guud shirkado maamulaan, macaashna ka helaan.
Taageerayaasha xisbiga Sverigedimuqaraadi-ga ayaa iyagu badanaa dhexdhexaad arrinkaan ka ah.
David Ahlin oo isagu ka hawlgala hey’adda Ipsos oo iyadu baaritaankaan wax ka sameysey ayaa sheegey in taageerayaasha xisbiyada ee weydiimahaan laga qaadey ay badankoodu rabi lahaayeen sidii la isu waafajin lahaa in dadweynaha xoriyad loo siiyo kala doorashada goobaha ay adeegyada guud ka helayaan , dhanka kalana la helo hab lagu xakameyn karo macaash farabadan oo shirkado gaar loo leeyahay ka helaan goobahaas adeegyada guud.
Sidii labadaas arrimood farsamo ahaan la isu waafajin lahaana waa mid siyaasiyiinta dalkaan Iswiidhan u taal ayuu yiri David Ahlin oo isagu ka hawlgala hey’adda Ipsos.